often - Synonyms of often | Antonyms of often | Definition of often | Example of often | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for often
Top 30 analogous words or synonyms for often
ဆေးဝါးဗေဒ e. Therapy of brain abscess, often in combination with penicillin orathird-generation cephalosporin.
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ Similarly, payload increases are often achieved in later missions independent of engine thrust. This is by weight reduction or trajectory reshaping.
တိရစ္ဆာန် အချို့နိုင်ငံဒေသများ၌ သိပ္ပံနည်း မကျသော အသုံးအနှုန်းများကို ကိုင်စွဲကာ တိရစ္ဆာန်ဟူသော ဝေါဟာရမှ လူသားများကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ အနှီသူတို့ ဆိုလိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန် လောကတွင် လူသားမဟုတ်သော တိရစ္ဆာန်များ ပါဝင်ကာ လူသားနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်သော အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် ကျောရိုးရှိတိရစ္ဆာန်များကိုမူ ချွင်းချက် မရှိ ထည့်သွင်းထား၏။ (In everyday non-scientific usage the word excludes humans – that is, "animal" is often used to refer only to non-human members of the kingdom Animalia; often, only closer relatives of humans such as mammals, or mammals and other vertebrates, are meant.)
ရုရှားသဒ္ဒါ In general, there are fewer subordinate clauses than in English, because the participles (причастие ) and adverbial participles (деепричастие ) often take the place ofarelative pronoun/verb combination. For example:
ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ် ဌာန (control unit, often calledacontrol system or CPU) သို့မဟုတ် စီပီယူ သည် ၏ အစိတ်အပိုင်း မျိုးစုံကို လမ်းဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ် ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်ကြောင်းခြင်း ဖတ်ရှု ပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြန်သည်။ ထိန်းချူပ် ဌာနသည် အဆင့်မြင့်သော များတွင် ၎င်းညွှန်ကြားချက် အစဉ်များကို မြန်ဆန်စေရန်အတွက် ခုန်ကျော် ဖတ်ရှု ခြင်း လုပ်လေ့ရှိသည်။
ဆေးဝါးဗေဒ a. Doxycycline for 7–14 days လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် (ကလာမိုင်ဒီးယား) အင်ဖက်ရှင်၊ ကျား-မ ဆီးပြွန်-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျား-ဆီးကြိတ်-အစေ့ရောင်၊ Pelvic inflammatory disease is often treated with doxycycline plus cefoxitin or cefotetan. Other chlamydial infections (psittacosis, lymphogranuloma venereum, trachoma) and sexually transmitted diseases (granuloma inguinale) also respond to doxycycline.
ဓာတ်ပုံ ဓာတ်ပုံ (photograph often shortened to photo) ဟူသည် အလင်းကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသော ဓာတ်သားပါသည့် ဖလင်ပြားပေါ်သို့ အလင်းကျရောက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်ရရှိလာသော ပုံရိပ် (image) ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံအများစုကို ဓာတ်ပုံ ပုံရိပ်ကို ဝင်ရောက်လာအောင် ဖမ်းယူနိုင်သော မှန်ဘီလူးပါသည့် ကင်မရာ ဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရရှိအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်း အတတ်ပညာကို ဓာတ်ပုံပညာ သို့မဟုတ် ဖိုတိုဂရပ်ဖီ (photograpgy) ဟုခေါ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ("photograph") ကို ၁၈၃၉ တွင် ဆာဂျွန်ဟာရှဲလ် (Sir John Herschel) က ဂရိဘာသာစကား ("φῶς (phos)" = "light" = အလင်း နှင့် "γραφή (graphê)"= "drawing, writing" = ပုံဆွဲခြင်း။ နှစ်ခုပေါင်းပါက "drawing with light" = အလင်းဖြင့်ပုံဆွဲခြင်း) မှ စတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့သည်။